Taliyaha Ciidamada militariga Itoobiya oo Deg deg ugu yeeray Ciidamada Keydka eee Dalkaas | Dayniile.com
Home Warkii Taliyaha Ciidamada militariga Itoobiya oo Deg deg ugu yeeray Ciidamada Keydka eee...
Taliyaha Ciidamada militariga Itoobiya oo Deg deg ugu yeeray Ciidamada Keydka eee Dalkaas
Taliyaha militariga Itoobiya ayaa ugu baaqay askartii hore uga tirsanaan jirtay militariga inay dib ugu soo biiraan ciidanka, si ay ula dagaalamaan jabhadda TPLF.
Codsigan ayaa ku soo beegmaya iyadoo xoogaga fallaagada – ee ay hormuud ka tahay TPLF ay u dhaqaaqeen dhanka caasimadda Addis Ababa.
Safaaradda Mareykanka ayaa u sheegtay dhammaan muwaadiniinta Mareykanka inay sida ugu dhaqsiyaha badan uga baxaan Itoobiya, iyadoo ay jirto xaalad amni oo aad u kacsan.
Saacado ka hor 9 kooxood oo dowladda Itoobiya ka soo horjeeda ayna ku jirto kooxda TPLF ayaa isku raacay inay sameystaan isbahaysi ka dhan ah maamulka Ra’iisul Wasaare Abiy Axmed.
Todobaadkan ayay ahayd markii madaxda dowladda ay ku dhawaaqeen xaalad deg deg ah, waxayna ugu baaqeen dadka in ay hubkooda diiwaan galiyaan oo ay u diyaar garoobaan ilaalinta goobaha ay ku sugan yihiin.
Beesha caalamka ayaa dhankooda ku baaqaya in dagaalka Itoobiya la joojiyo.
Xoghayaha Arimaha Dibada ee UK Liz Truss ayaa ku boorisay labada dhinac inay ku heshiiyaan xabad joojin iyadoo taleefoonka kula hadashay ra’iisul wasaare ku xigeenka Itoobiya maanta.
Khamiistii, xoghayaha arrimaha dibadda ee Maraykanka Antony Blinken ayaa ku baaqay xabbad joojin, isagoo yiri: “Colaadda Itoobiya waa in la soo afjaraa.”
Ergayga Gaarka ah ee Mareykanka u qaabilsan Geeska Afrika ayaa ku sugan Addis Ababa isagoo kulamo la yeelan doona wasiiradda dowlada.
Isbahaysiga ay maanta ku dhawaaqeen kooxaha ka soo horjeeda rai’sul wasaare abiy axmed ayaa waxay sheegeen in ay doonayaan in ay xukunka ka tuuraan rai’sul wasaaraha iyo dowladiisa ayna dhisaan maamul kumeelgaar ah.
Afhayeenka TPLF, Getachew Reda, ayaa BBC-da u sheegay in ujeedkooda ugu weyn uu yahay inay ka hortagaan waxa uu ku tilmaamay xasuuqa ka dhanka ah shacabka Tigray ee uu ku eedeeyay ra’iisal wasaare Abiy Axmed.
Dowladda Itoobiya ayaa sheegtay inay qarka u saaran tahay guul buuxda oo ka dhan TPLF, balse xooggaga Tigray ayaa maalmihii dambe u muuqday kuwo ku gacan sarreeya dagaalka.
Colaadda ka socota Waqooyiga Itoobiya ayaa billaabantay 4-tii Nofembar 2020, kadib markii uu Abiy Axmed amray ciidamada federaalka inay duullaan ku qaadaan ururka TPLF oo xoog ku qabsaday taliska waqooyi.
Muddo kooban kadibna, caasimadda Tigray ee Mekelle ayaa gacanta u gashay ciidanka Itoobiya, balse bartamihii June ee sanadkan ayaa waxaa ku soo rogaal celiyay oo qabsaday xooggaga Tigray.
Previous articleHorumar laga Sameeyay Wadahadalladii Militariga iyo Raisal Wasaaraha Dalkaas hamdok
Next articleSafiirka Soomaaliya ee Masar oo la kulmay Agaasimaha xarunta Caalamiga ah ee xalinta khilaafaadka Masar
𝗖𝗔𝗝𝗔𝗟 𝗩𝗜𝗗𝗘𝗢 𝗔𝗛 𝗢𝗢 𝗞𝗨 𝗕𝗔𝗔𝗤𝗔𝗬𝗔 𝗜𝗡 𝗟𝗔 𝗟𝗔𝗔𝗬𝗢 𝗠𝗔𝗗𝗔𝗫𝗗𝗔 𝗛𝗔𝗪𝗜𝗬𝗔𝗛𝗔 𝗜𝗬𝗢 𝗦𝗛𝗔𝗖𝗔𝗕𝗞𝗢𝗢𝗗𝗔
DEGDEG “ Dagmada Kaaraan gaar ahaan meel u dhaw Ceelka-Garbole hadda lagu dilay wiil darwal Bajaaj
Gudoomiye Ciro” Doorashada lama joojinaayo Kursi kasta aan marin habraaca rasmiga ahna dib ayaa loo celinayaa Daawo
Rooble oo kulan la yeeshay Madaxda warbaahinta gaar ahaan Agaasimayayaasha Tv-yada iyo Idaacadaha Muqdisho
Dowladda Mareykanka oo ugu baaqday dowladda federaalka in ay Wada hadal la galaan maamulka Ahlu-Sunna
Maxamed Bin Salmaan oop bilaabaya booqasho uu ku tagayo dalalka Khaliijka Carabta
Taliska Guud ee Booliiska Galmudug oo ugu baaqay madaxda Ahlusunna in...
Taliska Guud ee Booliiska Galmudug ayaa ugu baaqay madaxda Ahlusunna sida Macalin Maxamuud iyo Shiikh Shaakir inay joojiyaan abaabulka dagaal ee ay ka wadaan...
Jubaland oo ka hadashay weerar ay Shabaab ku qaadeen Xerada Milatari...
Dadka reer Jarmal oo natiijada hordhaca u doortey Scholz inuu noqdo...
Kenya oo bishan November joojin doonta dhoofinta noocyada Hass iyo Fuerte...
Xildhibaan Sakariye “ farmaajo ayaan u tagay waxa uu Yiri drone-kaaga...
Wasiirka Maaliyadda Puntland oo sheegay in Ganacsadihii diida Canshuurta uu la...
axmed shiikh - October 7, 2021 0